आफन्त र छिमेकी म’लामी नगएपछि मुस्लिमले गरे हिन्दू संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/आफन्त र छिमेकी म’लामी नगएपछि मुस्लिमले गरे हिन्दू संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि
आफन्त र छिमेकी म’लामी नगएपछि मुस्लिमले गरे हिन्दू संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि
पर्सा – वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नं. १३ राधेमाई टोलको उत्तरतर्फ रहेको करवोला । जोगीको कुटी छ। त्यही कुटीभन्दा थोरै उत्तरपश्चिम हुँदै श्रीसिया नदी बगेको छ । त्यही नदीको किनारमा वडा नं. १३ ,१४ का हि’न्दूको अ’न्त्ये ष्टि गर्ने घाट रहेको छ । आइतबार दिउँसो १ बजेको टण्टलापुर घाममा नदी किनारमा केही मान्छेहरु काठको मचान मिलाउँदै छन् ।
श,व जला’उनको लागि काठको चाङ मिलाउनेहरु मु’स्लिम समुदायका देखिन्छन् । मु’स्लिम समुदायमा श,व गाड्ने चलन छ । तर उनीहरु श,व जलाउनका लागि दाउराको बन्दोबस्त गर्दै थिए । त्यति नै बेला वडा नं १३ का वडाध्यक्ष तुफान अन्सारी पनि घाट पुग्नुभयो। लालबाबु साहको श,व अस्पतालमै थियो । केही मु’स्लिमहरु घाटमा पुगेर आवश्यक तयारी गर्दै थिए ।
हि’न्दूहरुको श,व अन्त्येष्टि गर्ने विधिका बारेमा मु’स्लिमहरु कोही जानकार थिएनन् । वडाध्यक्षले जुक्ति निकाल्नु भयो । नजिकैको करवोला मठमा जानु भयो । उहाँले हि’न्दू व्यक्तिको श,व जला’उनु परेको र आफूहरुलाई अप्ठेरो भएको भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भयो । वडाध्यक्ष अन्सारीको आग्रह मानेर केही व्यक्ति घाटसम्म गए । त्यसपछि एम्बुलेन्समा लालबाबु साहको पा’र्थिव शरीर पनि ल्याइयो ।
दिउँसोको २ बज्नै लाग्दा साहका आफन्त मध्ये एक जना ज्वाईं र एक जना सम्धी आइपुगे । मु’स्लिम समुदायका व्यक्तिहरुको सहयोगमै अ’न्त्येष्टिको काम अगाडि बढ्यो । लालबाबु साहको ठूलो छोरो आइसोलेशनमा भएकाले कान्छो छोरा १७ वर्षका राजबाबु मात्र किरियापुत्रीको रुपमा थिए । उनलाई सदगदको विधि थाहा थिएन । मृ,तकका ज्वाईं र सम्धीलाई पनि थाहा थिएन ।
घाटमा कि’रिया बस्ने र अरुको कपाल का’ट्नका लागि हजाम पनि लैजानु पर्छ । तर हजाम पनि नपाएको वडाध्यक्ष अन्सारीले बताउनु भयो। मृ,तकका सम्धीले कि’रियापुत्रीको कपाल का’ट्ने प्रयास गरे । तर जानेनन् । ‘म मु’स्लिम हुँ मैले का’ट्दा पनि हुन्छ भने म का’टिदिन्छु’ भनेर एम्बुलेन्सका चालकले प्रस्ताव गरेपछि त्यहाँ पुगेका हि’न्दू सबैले हुन्छ भनेपछि हि’न्दू कि’रियापुत्रीको केशको मु’ण्डन एक मु’स्लिमले गरे ।
१९ लाख ९१ हजार नगदसहित हुण्डी कारोबारी पक्राउ